IMEX oo hormuud u ah Shirarka Yurub iyo Safarka Shirweynaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirarka » IMEX oo hormuud u ah Shirarka Yurub iyo Safarka Shirweynaha
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Hoggaaminta mustaqbalka shirarka Yurub iyo warshadaha shirarka, MMGY Hills Balfour iyo MMGY Travel Intelligence Europe waxay iskaashi la sameynayaan culeyska culus ee adduunka iyo hoggaamiyaha warshadaha MICE, IMEX, si loo naqshadeeyo loona soo saaro sahan 2021/22 oo cinwaan looga dhigay “Sawirka Kulammada Yurub iyo Socdaalka Shirarka: Aragtiyaha socdaalayaasha iyo xirfadlayaasha qorshaynta. ”
Sahankan waxaa loogu talagalay in lagu baaro ma aha oo kaliya dareenka qorsheeyaha kulanka laakiin sidoo kale muhiimad ahaan, ujeeddooyinka iyo doorbidyada ka -qaybgalayaasha.
Waxay gacan ka geysan doontaa hagitaanka go'aannada ku saabsan maalgelinta, miisaaniyadda suuqgeynta, kobaca guud, iyo xeeladaha horumarinta.
Sahanku wuxuu bixin doonaa faham cad, dhammaystiran, oo ku habboon waqtigii waxa shirarka iyo heshiisyada Yurub u eg yihiin hadda iyo mustaqbalkaba.
Markii ugu horreysay ee nooceeda ah Yurub, sahankan waxaa loogu talagalay in lagu baaro wixii ka baxsan xuduudaha jira, iyadoo la baari doono oo kaliya la kulanka dareenka qorsheeyaha laakiin sidoo kale muhiimad ahaan, ujeeddooyinka iyo doorbidyada ka -qeybgalayaasha. Goobaha Yurub iyo kuwa caalamiga ah iyo sidoo kale daneeyayaasha warshadaha dalxiiska ayaa fursad u leh inay hoggaamiyaan soo kabashada bulshooyinkooda, oo ku saleysan goorta iyo sida warshadaha shirarku uga soo laabtaan COVID-19. Sahankani wuxuu gacan ka geysan doonaa hagidda go'aannadooda ku aaddan maalgelinta, miisaaniyadda suuqgeynta, guud ahaan xeeladaha kobcinta iyo horumarinta iyadoo la siinayo faham cad, dhammaystiran oo waqtiyeysan oo ku saabsan waxa shirarka iyo heshiisyada Yurub u eg yihiin hadda iyo mustaqbalka.
Sawirka Shirarka Yurub iyo Socdaalka Shirweynaha
Sida lagu muujiyey sahanka MMGY Travel Intelligence ee sahankii ugu dambeeyay ee Mareykanka, waxaa jiri kara kala duwanaansho qoto dheer oo u dhexeeya fikradaha iyo dabeecadaha ka dhex jira qorsheeyayaasha iyo ka -qeybgalayaasha. Yurub waxay hoy u tahay qaar ka mid ah qaban -qaabiyeyaasha dhacdooyinka meheradda caalamiga ah ee ugu muhiimsan, iyada oo aragtida aan la qiyaasi karin laga helay sahankan, meelaha la tagi karo waxay ku soo bixi karaan kalsooni xagga aqoontooda iyo fahamka muuqaalka MICE ee Yurub ee bilaha iyo sannadaha soo socda.
Isagoo ka faalloonaya sahanka Mareykanka, Butch Spyridon, Madaxweynaha iyo Maamulaha Shirkadda Nashville Convention & Visitors Corporation (NCVC), wuxuu yiri: “Sahaminta Kulammada & Heshiisyada ay qaadeen MMGY Travel Intelligence waxay daaha ka qaaday sawir dhab ah oo ku saabsan muuqaalka warshadaha waxayna siisay aragti aad u qiimo badan Maskaxda qorsheeyayaasha Maraykanka iyo ka qaybgalayaasha. Iyada oo la kaashanayo xogtan saxda ah, Nashville waxay awood u leedahay inay abuurto istiraatiijiyad M&C oo aad u xoog badan, ku habboon oo horay loo sii fikirayo, iyadoo gacan ka geysaneysa dib-u-habeynta iyo dib-u-bixintayada dib loogu celiyo suuqa. ”
Carina Bauer, IMEX Maamulaha Kooxda, ayaa faallo ka bixiyay: “Maaddaama shirarka Yurub iyo warshadaha dhacdooyinka ay dhigayaan 'dhismayaasha horay u sii fiican,' natiijooyinkan cilmibaarista waxay bixin doonaan aragtiyo cusub iyo macluumaad ganacsi oo ku qotoma cod, xog wakiil. Dhammaanteen waxaan leenahay dareen mug leh oo ah halka aan ka nimid iyo waxa aan soo marnay labadan sano ee la soo dhaafay. Cilmi -baaristani waxay damacsan tahay inay muujiso sawir cad oo ku saabsan halka aan u soconno. ”
Waxaa loo qoondeeyay qorsheeyayaasha dhammaan daafaha Yurub iyo ka -qaybgalayaasha UK, Jarmalka, Faransiiska iyo Netherlands, sahaminta waxaa lagu samayn doonaa laba mowjadood: kan koowaad Q4 2021 iyo kan labaad Q1 2022.
Waxay ka hadli doontaa mowduucyo khuseeya oo waqtigooda ku habboon sida:
Sidee ayay ka -qaybgalayaashu u dareemayaan shirarka dalwaddu iyo kuwa isku -jira iyo sidee bay u malaynayaan in hab -dhaqankoodu saamayn ku yeelan karo 2022 iyo wixii ka dambeeya?
● Waa kuwee meelaha shirarka u qabta rafcaan ka-qaybgalayaasha horay u socda iyo sidee dookhyadan loo beddelay COVID-19 dartood?
Qaybaha warshadaha qaarkood ma u badan yihiin qaybaha warshadaha si ay uga sii qaybgalaan si la mid ah sidii ay u samayn jireen ka hor COVID-19?
Content Waa maxay nuxurka, goobaha iyo/ama dhiirrigelinta si ku filan ugu qasbaysa ka -qaybgalayaashu inay gaaraan go'aanka safarka kulanka?
Waa maxay caqabadaha, marka laga reebo welwelka caafimaadka iyo badbaadada ee muuqda, ee u baahan in la tirtiro ama la yareeyo?
Waa maxay qaybaha shirarka (tusaale. SMERF, urur, shirkad, iwm.) Qorsheeyayaashu waxay filayaan inay marka hore soo kabtaan oo waa maxay waqtiga la filayo?
● Sidee bay suuq -geynta iyo ururrada maareyntu si wanaagsan u dabooli karaan baahida kulammada hadda iyo mustaqbalkaba?
● Sidee bay wax -u -qabashada adeegyada ama saadka u saamayn kartaa qorshaynta kooxda, maxaase ah tallaabooyinka badbaadada ee muhiimka u ah qorsheeyeyaasha iyo ka -qaybgalayaasha labadaba?